श्रीमानले तँ, तिमी भन्न हुने, श्रीमतीले किन नहुने | Jwala Sandesh
श्रीमानले तँ, तिमी भन्न हुने, श्रीमतीले किन नहुने
| प्रकाशित मितिः आइतवार, साउन ३२, २०७७ ::: 245 पटक पढिएको |
पवित्रा घिमिरे – ‘हेर फलानीले त उसको लोग्नेलाई कस्तो हेप्दी रहिछ है ? कसरी तिमी भन्न सकेको होला ? राम राम, ढिस्कानीले त झन् सोझै तँ पो भन्दिरहिछ ? कस्तो मति नभएको ? आधुनिक भनिने महिलाहरुकै मुखबाट पनि हामी यस्ता कुराहरु सुन्ने गर्छौं । श्रीमानलाई तिमी वा तँ भन्ने महिलाहरु गतिछाडा हुन् भन्ने खालको सोचाई उनीहरुमा पाइन्छ । जबकि पुरुषले भने आफ्नो श्रीमतीलाई तँ, तिमी नै भनिरका हुन्छन् । त्यसमा कुनै प्रश्न उठ्दैन । कुनै प्रतिवाद र आलोचना गरिँदैन । महिलाहरुले नै यसलाई सहर्ष स्वीकार्छन् ।
त्यही शब्द पुरुषले प्रयोग गर्दा स्वीकार्य हुने र महिलाले प्रयोग गर्दा अपमानजनक किन हुन्छ ? के यो नियम पुरुषले बनाएका हुन ? कि महिला आँफैले यस्ता नियममा बाँधेर आफैंमाथि अन्याय गरिरहेका छन् ?केही दिन अगाडि नेपालका चर्चित राजनीतिज्ञ गगन थापा र उनकी जीवनसाथीसँगको अन्तरवार्ता युटुबमा राखिएको रहेछ । मैले हेरेँ । धेरैभन्दा धेरै हेरिएको उक्त अन्तरवार्ता विवादमा परेछ । कारण रहेछ गगन थापाकी श्रीमतीले श्रीमानलाई ‘तिमी’ र’तँ’ भनेर सम्बोधन गरिन् रे । हेपिन रे, सम्मान गरिनन् रे । धेरैले यस्तो आशयको कमेन्टहरु गरेका रहेछन् ।
अंग्रेजीमा एउटै शब्द ‘यू’ भनेपछि सबैलाई समेटिन्छ । यसमा कुनै भेदभाव देखिदैँन । सम्मान वा असम्मान दुबैमा एउटै शब्द प्रयोग हुन्छ । तर नेपाली भाषाले भने किन यति ठूलो भेदभाव र समस्या निम्त्याएको छ ?केही समय अगाडि साहित्यकार शारदा शर्मा विवादित भएकी थिइन् । आफ्ना पुस्तक र पत्रिकामा प्रकाशित केही लेखहरुमा उनले श्रीमान नरहरी आचार्यलाई ‘तिमी’ ले सम्बोधन गरेकी थिइन् । यसपश्चात उनलाई श्रीमानलाई हेपेको आरोप लागेको थियो ।
आजकालको युवा-युवतीलाई प्रेममा पर्न कुनै महाभारत छैन । प्रविधिको विकाससँगै हलिवुड, बलिवुड चलचित्रको प्रभावले गर्दा क्षणभरमा एक-अर्काप्रति आकषिर्त हुन्छन् । सुरुमा साथी हुँदा एक-अर्कालाई तँ वा तिमीको प्रयोग गर्छन् । त्यहाँ कुनै सीमाको बार लगाइएको हुँदैन । अझ कतिपय अवस्थामा त केटाहरुले केटीहरुलाई ‘हृया तपाईं नभन’, ‘तँ भन’ ‘तिमी भन’ तपाईं भन्दा कस्तो बुढो फिल हुन्छ यार भनेर भन्ने गर्छन् । तर जब उनिहरु एक -आपसमा माया प्रेममा धेरै डुब्छन र आफ्नो सम्बन्धलाई संस्थागत गर्ने निर्णय गर्छन् र विशेषगरी केटाहरुले नियमहरु बनाउन सुरु गर्छन् । मलाई सबको अगाडि तिमी नभन है, मलाई तँ भन्ने होइन नि । मलाई त हजुर, तपाईं भन्नुपर्छ ।अनि केटीको कुरा आउँछ । के भो त, तिमीभन्दा सम्मान हुँदैन र ? पहिले त हुन्थ्यो त । केटा भन्छः नाइँ अरुले कुरा काट्छन् । अनि केटीको केही लाग्दैन । कतिपय अवस्थामा त केटीहरुले प्रतिप्रश्न नै नगरी श्रीमानसित सहमति व्यक्त गर्दछन् ।
गीतसंगीतमा माया व्यक्त गर्दा तिमी शब्दकै प्रयोग गरिएको पाईन्छ । केटाले पनि केटीले पनि तिमी नै भन्छन् र त्यही मिठो सुनिन्छ । तपाई, हजुरले सम्वन्धमा बनावटीपन ल्याइदिन्छ । त्यसकारण श्रीमान-श्रीमतीको सम्वन्धको मर्म बुझौं र आफूलाई सहज हुने भाषा प्रयोग गरौं । अरुलाई देखाउन वा लोकलाजको डरले आफैंलाई भाषिक दमनमा नपारौ । अनलाइनखबरबाट साभार गरिएकाे